काठमाडौं । जनकपुरका लोकप्रीय चिकित्सक थिए डा. सूर्यनारायण यादव । जनकपुरमा रहेको क्लिनकमा उनले दिने उपचारले लोकप्रीयता पाएको थियो । तराई मधेशका जनताका प्रीय चिकित्सक यादवलाई तत्कालिन संघीय समाजवादी ...
राजीनामा फिर्ता लिन सांसद यादवललाई समाजवादी पार्टीको आग्रह
२८ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.सूर्यनारायण यादवले पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता समाजवादी पार्टी नेपालले आग्रह गरेको छ । सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको उम्मेदवा...
राजनीतिले क्लिनिक ठप्प भएपछि डाक्टर सांसदको राजीनामा
समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय सांसद डा.सूर्यनारायण यादवले एक्कासि पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महरा समक्ष उनले सोमबार राजीनामा बुझाएका हुन्। जनकपुरमा रहेका यादवले स्वास्थ्य समस्या ...
प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले दिए राजीनामा
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले राजीनामा दिएका छन् । उनले आफ्नो स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएको बताइएको छ । अहिलेसम्म राजीनामा स्वीकृत भने भएको छैन । तत्कालीन...
यसकारण दिए यादवले सांसद पदबाट राजीनामा
काठमाडौं, २८ साउन । समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले सांसद् पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबारसप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद यादवले मंगलबार राजीन...
डा‍. सुर्यनारायण यादवले सांसदबाट राजीनामा दिए
समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा.सुर्यनारायण यादवले राजीनामा बुझाएका छन् । सप्तरी–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यादवले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामा बुझाएका हुन् । सभामुख महराले सांसदको रा...
यसकारण दिए सांसद यादवले राजीनामा
काठमाडौँ । सप्तरी १ बाट प्रतिनिधी सभामा निर्वाचित भएका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले सोमबार आफ्ना पदबाट राजीनामा दिए । सांसद यादवले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामापत्र बुझाए । तर, सांसद यादवको...
सांसद् सूर्यनारायण यादवले दिए राजीनामा, कारण देखाए स्वास्थ्य समस्या
काठमाडौँः प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्य नारायण यादवले राजीनामा दिएका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यादवले राजीनामा बुझाएका हुन्। सोमबार नै राजीनामा दर्ता भए पनि कुनै औपचारिक निर्णय नभएको सभामुखक...
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. यादवको राजिनामा फिर्ता हुने
जनकपुरधाम । समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा सूर्यनारायण यादवको राजीनामा फिर्ता हुने भएको छ । सांसद यादवले सभामुख कृष्णबहादुर महरा समक्ष सोमबार राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । स्वास्थ्य समस्या...
प्रतिनिधी सभाका सांसदले दिए राजीनामा
kendrabindu.com . १ बर्ष अघि
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले राजीनामा दिएका छन् । सोमबार यादवले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या बढेकाले आराम गर्न राजीन...
काठमाडौँ । समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्यनारायण यादव ‘सुरज’ ले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा व्यस्ततालगायतका व्यक्तिगत कारण देखाउँदै उनले राजीनामा दिएको बताइएको छ ...